Loogu talagalay blogger, xirashada kabaha gaaban ka dib sannadihii 50 waa mid weyn, taageerayaasheeda ayaa gebi ahaanba isku raacay! - KU SAMEEYSAA
ACCUEIL » DARYEELKA CAAFIMAAD "Loogu talagalay blogger, xiro funaanado gaagaaban ka dib sannadihii 50, waa mid aad u wanaagsan, taageerayaashiisuba way wada aqbaleen!
Loogu talagalay blogger, xirashada kabaha gaaban ka dib sannadihii 50 waa mid weyn, taageerayaasheeda ayaa gebi ahaanba isku raacay!
Ogaanshaha sida had iyo jeer loo ekaado moodada iyo moodada maahan kaliya inay ku saleysan yihiin barashada isbeddelada cusub, laakiin sidoo kale falanqayntaada, taas oo ah tan ugu habboon ee xaalad la siinayo iyo sida la isugu daro waxyaabo kala duwan. Waxaa si gaar ah lagula talinayaa haweenka ka da 'weyn 50 sano inay taxaddar muujiyaan markay isku dayaan inay u ekaadaan kuwa ka da' weyn maxaa yeelay waa wax aad u fudud in laga gudbo.
Икация от Inna Malikova (@innamalikova) 29 May 2019 ee 9: 45 PDT
Qaarbaa jira sumadaynta dharka loogu talagalay haweenka waa inaysan xidhnayn isla marka ay gaaraan da'da 35. Tusaale ahaan, funaanado leh tirooyin, dusha sare ee dalaga, daabacaadaha kuleylka kuleylka iyo shaagagga leopard-ka daabacan.
Liiskan sidoo kale waxaa ku jira miniskirts. Dharkaasina wuxuu noqday mawduuca wadahadalka tooska ah ee internetka. Blogger-ka 42 ee Ruushka, heesta iyo soo saare, Inna Malikova, waxay la wadaagtay naxdinteeda faallooyinka "aan habooneyn" iyo muujinta sawirrada boggeeda Instagram.
Икация от Inna Malikova (@innamalikova) 17 Yuun 2019 ee 9: 41 PDT
Marka lagu daro guud ahaanba xukumida dumarka ka weyn 40 sano kuwaas oo doonaya inay xiraan, dheh, koox leh qoorta quruxda badan ama miniskirt, bulshada ayaa sidoo kale soo saartay waxyaabo tabo ku saabsan.
Waxaan ku raacsanahay inay jiraan xaddidid iyo in suuxinta loo baahan yahay in marka hore la xurmeeyo. Aniga waxaan ahay ilaaliye quruxsan. Laakiin markay tahay wax la jaan qaadaya, maxay haweenku u heli karaan cudurdaar ay ku sababeeyaan xulashooyinkooda ama u siiyaan xorriyadda ay ku qabtaan iyaga? Intaa waxaa dheer, ma fahmin sababta dayacaani ku timid dumarka kale.
Икация от Inna Malikova (@innamalikova) 13 Apr 2019 ee 2: 56 PDT
Taageerayaasha barta internetka caan ka ah ayaa uga mahadceliyay sida ay cinwaan uga ahayd mowduucan oo ay taageertay.
Waan ku raacsanahay waxkasta oo aad tidhaahdo. Waalidkaa waxay nasiib ku leeyihiin in ay helaan gabar qurux badan oo soo jiidasho leh oo danaysa iyaga.
Waan ku raacsanahay. Haweenku had iyo jeer way kaftamaan midba midka kale, sidaa daraadeed waxay xukumaan kuwa kale.
Waxaan had iyo jeer ku fikiri jiray, "Maxaad ugu dhib yaraynaysaa inaad jimicsi sameyso si aad u hesho lugaha wanaagsan haddii aad rabto inaad qarin karto si kastaba?" Taasi waa nacasnimo, miyaanay ahayn? Lugaha cufan ee quruxda badan ayaa loo sameeyay in lagu tuso adduunka, waad u qalmeysaa inaad sameyso!
Публикация от ОДЕЖДА ЖЕНСКАЯ ОТ ПОСТАВЩИКА (@fashion_boutique1313) 3 May 2019 ee 5: 01 PDT
Maxay tahay fikirkaaga ku saabsan tan? Ma xiran kartaa miniskirts haddii aad tahay 50 sano ama ka weyn? Ma gashan kartaa dharka adag? Fadlan, kula wadaag fikradahaaga faallooyinka hoose.
Ka dib kiimiko ku daaweyn iyo labo mastektomi, waxay baratay in ogaanshaha kansarka ay ahayd mid khaldan